Ọ bụ maka na anyị na-akwanyere Chineke ùgwù. Ọ bụ eziokwu na mkpa Chineke anaghị abụcha ụdị ejiji anyị ji bịa ọmụmụ ihe, anyị kwesịrị iji ejiji otú ga-egosi na anyị na-akwanyere ma yanwa ma ụmụnna anyị ùgwù. (1 Samuel 16:7) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga hụ onyeisi ala anyị, anyị ga-eji ejiji dị mma n’ihi ùgwù anyị na-akwanyere ya. Anyị kwesịkwara ịna-eme otú ahụ mgbe anyị na-aga ọmụmụ ihe. Otú anyị si jie ejiji ga-egosi ma ànyị na-akwanyere Jehova ùgwù, bụ́ onye Baịbụl kpọrọ “Eze mba niile.” (Jeremaya 10:7) Ọ ga-egosikwa ma ànyị ji ebe anyị na-anọ efe ya kpọrọ ihe.
Ọ bụ maka na anyị na-eme ihe Baịbụl kwuru. Baịbụl gwara Ndị Kraịst ka ha na-eji ejiji ga-egosi na ha na-emeru ihe n’ókè, bụrụkwa ndị uche ha zuru okè. O kwukwara na ejiji ha kwesịrị igosi na ha “na-asọpụrụ Chineke.” (1 Timoti 2:9, 10) Mmadụ iji ejiji nke ga-egosi na ‘ọ na-emeru ihe n’ókè’ pụtara na ọ gaghị eyi efe tapaara ya n’ahụ́ ma ọ bụkwanụ nke ndị mmadụ ga na-ahụ ihe o yi n’ime. Inwe “uche zuru okè” ga-enyekwara onye ahụ aka ịna-eyi efe dị mma n’anya. Ma, ihe a na-ekwu ebe a abụghị na anyị enweghị ike iyi efe masịrị anyị. Ọ bụrụ na anyị ejie ejiji dị mma, o nwere ike ‘chọọ ozizi Onye Nzọpụta anyị mma,’ nyekwa ya otuto. (Taịtọs 2:10; 1 Pita 2:12) Anyị jie ejiji dị mma gaa ọmụmụ ihe, anyị na-eme ka ndị ọzọ ghara ileda ofufe anyị na-efe Jehova anya.
mailto:?body=Gịnị Mere Anyị Ji Eji Ejiji Dị Mma Aga Ọmụmụ Ihe Anyị?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012149%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Mere Anyị Ji Eji Ejiji Dị Mma Aga Ọmụmụ Ihe Anyị?